Resipeo tsaramaso mainty 55 hatao isaky ny sakafo - Sakafo
Teknolojia Fitaovana Asa Sy Vola Haingo Levitra Ao An-Tokantrano Boky Fironana Fampihenan-Danja Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy
Resipeo tsaramaso mainty 55 izay mihoatra ny lovia burrito
Efa teo daholo isika: nibanjina ny pantry ary manontany tena hoe inona eto an-tany no tokony hataontsika amin'ilay tsaramaso maintim-bazana sendra azy io. Fa ny fiheverana ireo bandy kely ireo dia feno proteinina sy fibre, tia fihinana zava-maniry ary manao fototra marobe ho an'ny sakafo mahasalama (salady salama, lasopy ary vilia baolina), tsy tokony ho sarotra loatra ny mahita aingam-panahy. Tsy mila mandentika azy ireo akory ianao! Vonona ny hiakatra amin'ny fiaran-dalamby? Vintana ianao - manana resipeo tsaramaso 55 izahay hanandramanao.
Mifandraika: Resipeo Chickpea 27 tsy ho reraka mihitsy
1. Ovy mamy sy kalalao voanjo mainty miaraka amin'ny Crema fromazy manga
Izahay dia manome alalana anao hihinana efatra.
Sary / Fitaovana: Katherine Gillen
2. sakay ovy miaraka amin'i Torkia sy ny voanjo mainty
Ity iray ity dia azo atao mora vegan; soloina tsaramaso mainty bebe kokoa (na tsaramaso hafa) ny vorontsiloza.
3. Huevos Rancheros miaraka amin'ny Voanjo Mainty sy Salsa Chipotle
Ry bruncher matsiro, ho anao ity iray ity. Ny ampahany tsara indrindra dia maharitra 20 minitra vao vita.
4. Voahangy Beili Voalavo Instant
Ny fandrahoana tsindry dia miasa haingana amin'ny lasopy sy lasopy izay mety handany ora maro hanaovana azy. Mampiasa tsaramaso mainty maina ity fomba fahandro ity, saingy tsy mila mandona azy ireo mialoha.
Rehefa maka sary salady fisakafoanana matsiro sy feno ary tsy mampalahelo isika dia ity no tena ao an-tsaintsika.
Dakozia be fatratra
6. Mpiboboka boanjo mainty fararano miaraka amin'ny saosy tongolo gasy
Lazao buh-bye amin'ireo burger veggie vele freezer izay mamela anao foana. Ireo dia miorina amin'ny zavamaniry ary feno proteinina (ary azonao atao aza ny manala azy).
dia tsara ho an'ny volo ny vaseline
7. Quinoa Black Bean Crock Pot Stuffed Peppers
Tsy misy henan'omby voahitsakitsaka ary — tsy misy fanafintohinana ny hen'omby - dia zavatra tena tsara izany.
8. Nachos maraina misy entana
Tsy mampaninona anay ny mifoha amin'ny nachos skillet feno lamba firakotra.
9. Butternut Squash Quesadilla miaraka amin'ny tongolo vita amin'ny caramel
Ny quesadillas ve no sakafo hariva haingana indrindra, mety, mahaliana ny vahoaka? Fanontaniana famelabelaran-kevitra izany.
Cookie sy Kate
10. Salady tsaramaso mainty vaovao
Izany dia mety hamenoana fonosana salady na burritos… na fandroana chunky ho an'ny chips tortilla.
11. Salady herin'ny Cheater
Inona no mahatonga azy ho salady herinaratra? Eny, mora vidy izy io, mora ny manamboatra ary mitaky fikarakarana dimy minitra fotsiny. Oh, ary matsiro izany.
Milalao tsara amin'ny dibera
12. Taco Ovy Mamy Chorizo ​​mora misy tsaramaso mainty
Ny famenoana azy dia singa matsiro telo fotsiny, mba hahafahanao mandany fotoana amin'ny fikarakarana ny topping tianao indrindra.
Ahoana ny sakafo matsiro
13. Slider Black Bean Butternut miaraka amin'ny Ketchup Chipotle
Mazava ho azy fa mini izy ireo mba hahafahanao mihinana bebe kokoa amin'izy ireo.
14. Easy Southwest Black Bean Polenta Casserole
Tsy misy gluten, vegetarian ary frezer-friendly. Inona koa no azonao angatahina?
15. Engilada Voanjo Black Veggie
Feno broccoli, epinara sy dipoavatra lakolosy izy ireo, saingy afaka mifanakalo legioma hafa ianao raha tianao.
Voanjo mamy sy safrona
16. Instant Pot Quinoa Enchilada Casserole
Vonona ny sakafo hariva ao anatin'ny 30 minitra.
Nosoratan'i Erin tsara
17. Tsaramaso mainty sy varika miaraka amina plantainina sy sakamalao mena
Ny zavatra tsara manaraka amin'ny dia mankany Cienfuegos.
18. Chipotle Black Bean, Brown Rice ary Mango Quesadillas
Reinvent Taco Talata.
19. Peppers Bells atsimo andrefana
Ny katsaka, ny vary ary ny hen'omby dia miteraka tsiro matotra, fa ny chipotle Gouda kosa dia misongadina ambony.
Sakafo hariva ao amin'ny Zoo
20. Akoho Santa Fe
Foto-tsakafon'ny fianakaviana vaovao.
Mifandraika: Sakafo hariva 50 tsy ampoizina hatao eo noho eo
TERI LYN FISHER / MIHA TOA ANAO MANome TAHAKA
21. Ovy mamy be loatra amin'ny yaourt Chipotle-Lime
Ny ovy mamy dia hitazona mandritra ny dimy andro ao anaty vata fampangatsiahana, mba hahafahanao manamasaka azy ireo mialoha ny fotoana. Fanomanana sakafo, sa iza?
22. Lasopy voanio mainty haingana sy mora
Mila porofo fa ny sakafo hariva dia mety ho matsiro sy fiezahana ambany? Aza mitady lavitra intsony. Ity lovia ity dia mitaky 35 minitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
namboarina vahaolana ho an'ny volo latsaka
Sary: Mark Weinberg / Styling: Erin McDowell
23. Low-Carb Zucchini Enchiladas
Tortillas, zara raha fantatray ianareo. (FYI, ity dia mamerina miasa tsara tokoa, mba hahafahanao manamboatra andiany lehibe ary mihinana azy mandritra ny herinandro.)
24. Sler Cooker Enchilada Casserole
Ny zavatra sarotra indrindra tokony hataonao dia ny manokatra kitapo misy tortilla chips.
25. Hummus Bean mainty
Vaky ny vilia iray amin'ny fety fanaovana cocktail manaraka ary jereo fa manjavona toy ny majika izy io.
Takelaka misy herinaratra
26. Salady Guacamole Quinoa haingana
Raha manan-jaza matsiro be ny milentika sy ny salady dia io no izy.
27. Koba Burrito lovia fisakafoanana miadana-mahandro
Manangona iray ho an'ny zanakao dia hanome aingam-panahy izany rehetra ny fialonana antoandro.
ny tantaran'ny mpanompo vavy fizarana 2 fizarana 12
DAVID FRENKIEL / KITCHEN GREEN GREEN
28. Portobello sy Avocado Quesadillas miaraka amin'ny saosy Green Green
Ny famenoana akoho sy fromazy mahazatra dia somary matanjaka. Manaova zava-manitra miaraka amin'ny holatra crispy, avocado mamy ary, tsaramaso, mazava ho azy.
29. sakay legioma tokana
Sakay ao anaty adiny iray? Miloka ianao fa azo atao izany. Ary tsy halainao akory ny hena.
30. Hoditra Ovy Meksikana Salama
Katsaka natsatsika, tsaramaso mainty, cilantro vaovao, ovy mamy, chipotle maranitra ary fromazy natsonika, nidina tao anaty tuber-boasary tianay indrindra-inona no tsy tiana?
31. Muffins Brownie Voanjo tsy misy fotony
Tsy afaka manandrana tanteraka ny tsaramaso amin'ity fitsaboana matsiro ity ianao, fa manampy proteinina sy fibre taonina. Tsy ho fantatry ny zanakao mihitsy ny mahasamihafa azy.
32. Tofu Scallion Black Bean Scramble
Sakafo maraina feno proteinina izay hahatonga anao handeha mandra-pisakafoanana atoandro. Soso-kevitra: Aza esorina ny tahini fa manampy menaka mahafinaritra amin'ny atody ianao.
33. Chipotle Lime Shrimp Bowls
Ny ampahany tsara indrindra amin'ity lovia mora ity dia ny fomba mahazatra azy - aza misalasala manolo izay voam-bary, proteinina na legioma anananao. Aza miala amin'ny marinade chipotle fotsiny.
34. Slider Black Butternut Sliders Miaraka amin'ny Ketchup Chipotle
Kely izy ireo, ka mandrosoa ary manana roa (na telo).
35. Sandwich mainty be proteinina avo-proteinina
Raha manana dimy minitra ianao dia manana fotoana ampy hanaovana an'ity sakafo atoandro tsy mahandro mahasalama sy mahafa-po ity.
36. Avocado sy Tortas Black Bean
Ity sandwich feno tsiro ity dia mahatonga ny ham sy ny fromazy hitanao ho maloka taloha.
37. Salady tsaramaso, katsaka ary avokado
Azonao atao ny mampifangaro an'ity salady zesty ity amin'ny chips tortilla, ampio amin'ny salady maitso na aroso eo ambonin'ny burger. Na azonao atao fotsiny ny mankafy azy avy ao anaty lovia amin'ny sotro fotsiny. Izany fa tsara.
38. Poblano maranitra, Voanjo Mainty ary Quinoa Enchiladas
Zava-maniry lehibe tsy mihinana zavamaniry izay mampiasa staples pantry maro toy ny tongolo, tongolo gasy, tsaramaso, quinoa ary zava-manitra. Plus ny fromazy rehetra satria, fromazy.
39. Avocado Black Bean Brownies mahasalama
Iza no milaza fa ny fihinanana sakafo mahasalama dia midika hoe mitsipaka tsindrin-tsakafo? Tsy izahay. Ireo brownies voa mainty tsy misy ronono sy tsy misy gluten dia mahavelona SY matsiro.
40. Salady tsaramaso mainty
Ataovy tsotra ihany ity salady mamy sy mamy ity.
41. Crock-Pot Pork Adobo miaraka amin'ny tsaramaso mainty
Avelao izy hanoto.
42. 10-Minute Pineapple Black Bean Tostadas
Mandehana Tex-Mex afaka minitra vitsy monja.
43. Cuban Black Bean & Mango Bowl
Havana, ooh na-na (ay) ...
44. Ovy natsatsika sy salady voanjo mainty miaraka amin'ny salsa katsaka mananasy vao
Ny lakileny hanaitra ny vahiny nefa tsy misy fiezahana be? Salsa namboarina.
fanatanjahan-tena mora hampihenana ny tavy kibo
45. Salmon Bowl miaraka amin'ny Farro, Black Beans ary Tahini Dressing
46. ​​Voanjo voaendy
Manao izany isaky ny fety mandra-pahatapitry ny fotoana.
47. Salady savily avocado sy Black Bean
Mihinana ny ambin-tsakafo mandritra ny sakafo atoandro mandritra ny herinandro.
48. Mikorisa miaraka amin'ny Cheesy Polenta
Mahazo brunch, miaraka amin'ny fanampian'ny polenta silky.
Lexi's Kitchen madio
49. lasopy tsaramaso mainty mora
Ny sakafo atoandro dia ho vonona anaty pinch (ary feno karaoty sy seleria, miaraka amina fatra legioma).
50. Voanjo mainty sy voanjo
Manaova paty fanampiny vitsivitsy ary atsiro amin'ny sakafo hariva amin'ny herinandro ambony.
Mifandraika: Ny 50 Recipe Burger lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao
tampon hitafy zipo
51. Voanjo mainty sy legioma Pizza Pizza
Tian'ny ankizy izany (ary toy izany koa ny olon-dehibe).
Ny Kisoa sy Quill
52. Spoy Soyrizo sy Black Bean Empanadas
Iza no nahalala fa afaka mikapoka empanada amin'ny kapoaka ianao?
53. Tsaramaso mainty miadana, Quinoa ary lasopy Tortilla akoho
Hihinana ity iray ity mandritra ny ririnina rehetra izahay.
54. Lalao Chili labiera andro
Na raha tiantsika ny hiantso azy, sakay labiera isan'andro.
55. Mini Nachos
Fahazoan-dàlana hihinana nachos hisakafo hariva.
Mifandraika: Sakafo 12 azonao atao amin'ny tsaramaso tsaramaso cannellini
Sokajy Drafitra Sy Torohevitra Mpahay Nahatratra Lamaody Mpanambady
Ao Amin'ny The News
ny fomba hitsitsiana ny volo latsaka
endrika bika boribory lavalava endrika vehivavy
asanas yoga dimy sy ny tombotsoany
Andriambavy alexandra avy any Luxembourg
disney fantsona fampisehoana taloha